Nkọwa:Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ ọrụ,480V Ịnọgide Na-ahụ Maka Ọkwọ ụgbọala,UFO High Bay Lighting,Ike Ike Nduzi,,
Home > Ngwaahịa > 200-480Vac nnukwu eletriki na-agba ọsọ eletriki > Voltage Industrial High Bay Driver UFO
Ngwaahịa nke Voltage Industrial High Bay Driver UFO , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ ọrụ , 480V Ịnọgide Na-ahụ Maka Ọkwọ ụgbọala suppliers / factory, wholesale high-quality products of UFO High Bay Lighting R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
ufo duru uzo di elu nke ugbo ala 150W  Kpọtụrụ ugbu a
UFO Industrial Power Lamp Power Supply  Kpọtụrụ ugbu a
Led High Bay UFO Light Driver  Kpọtụrụ ugbu a
ufo duru uzo di elu nke ugbo ala 150W
Isi ihe Wuru na-arụ ọrụ PFC ọrụ Nnukwu arụmọrụ ruru 93% Ọrụ nkwụnye nhọrọ, 1-10V ma ọ bụ PWM Ezube maka ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí 5 afọ ikike Nkọwapụta ngwaahịa Ngwaahịa ngwaahịa: nkwado: IP67 Ike mputa MAX: 150W nhazi oge...
UFO Industrial Power Lamp Power Supply
Ụgbọaka Ịgba Ọkụ na -ahụ maka ụzọ bụ ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji nwee ike ọ bụla n'èzí , Egwuregwu ọrụ. Ma ịchọrọ ọkụ iji mee ka ọhụụ ma ọ bụ melite nchebe, ọkwọ ụgbọala anyị na-enye ọkụ bụ ihe ngwọta kachasị mma maka ìhè ọ bụla ụzọ, ebe...
Nkwakọ ngwaahịa: 9pcs / katọn
Nkọwa: FD-150G-xx Series bụ a dịgasị iche iche nke IP65 e gosiri okirikiri ike onunu kwadebere maka nnukwu n'ọnụ mmiri & Low bay LED ọkụ. Egwu ahụ nwere mgbidi okirikiri, a na-agbanyekwa ya n'ime ogwe osisi aluminom iji hụ na IP Fim...
China Voltage Industrial High Bay Driver UFO Ngwa
Fahold LTD - Ngwaahịa Dept. emeela usoro ọhụrụ nke 200-480V LED gburugburu ndị ọkwọ ụgbọala, dị na 100W, 150W na 240W ntinye.
Nlereanya ọ bụla gụnyere ndepụta voltage ọsọ ọsọ site na 200Vac na 480Vac. Onye ọkwọ ụgbọala FD-150GW ugbu a na-enye usoro mmepụta ngwa ngwa na ngbanwe. Ụdị ụfọdụ bụ ọkwa nke klas 2.
All models feature Metal housings na IP65 e gosiri - na-eme ka ha adabara ngwa n'okpuru mmiri. Ha na-enye mgbanaka ọkụ, nchebe nchebe na nsochi dị mkpirikpi na mgbake na-agbake iji nọgide na-arụ ọrụ. O nwere ihe nkpochapu oku nke ikpochapu, wehich kwere ka o na-aru oru na Ta 65 ° C. Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ bụ UL Recognized for both US and Canada, na ndị EC kwadoro.
Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ ọrụ 480V Ịnọgide Na-ahụ Maka Ọkwọ ụgbọala UFO High Bay Lighting Ike Ike Nduzi Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ ọkụ